Igwe ojii Ka Ukwuu ma toro ogologo n'ihi mmetọ | Netwọk Mgbasa Ozi
David melguizo | | Meteorology, Igwe ojii
Igwe ojii n'elu Bombai
Nnyocha ọhụrụ na-ekpughe otu mmetọ ikuku na-esi ebuputa oke ikuku nke na-ahapụ anyị ogologo igwe, ogologo na igwe ojii. N'ime ọnwa nke November na Usoro nke National Academy of Sciences (PNAS), bipụtara ụfọdụ nsonaazụ ndị mechiri ogologo arụmụka. Ha na-ekpughe etu mmetọ ikuku si emetụta okpomoku ụwa. Ọrụ a ga - enyere aka melite izi ezi nke ihu igwe na ụdị ihu igwe.
Ọtụtụ ndị nchọpụta chere na mmetọ ikuku ọ na - eme ka igwe ojii mmiri ozuzo buru ibu, na - adịte aka site na ime ka ifufe dị n’ihu nwee ike ịkọwapụta, ma na - ebute ntụgharị dị n’ime. N'ime nyocha a, ọ chọpụtara na mmetọ, dị ka ihe ịtụnanya, na-eme ka igwe ojii na-adịgide adịgide mana, n'ụzọ dị iche karịa ka anyị siri chee na mbụ, site na mbelata nke akpụrụ akpụ ha na mbelata nke igwe ojii. Ihe dị iche a na-emetụta ụzọ ndị ọkà mmụta sayensị si anọchite anya igwe ojii na ụdị ihu igwe.
Ihe omumu a megharia ihe anyi na ahu kwa ubochi na ihe egosiputara na komputa. Kwuru na egosi igwe ojii yiri ekiri (Comulonimbus) dị elu ma buru ibu karị na sistemụ mmiri ozuzo nke nwere mmetọ, mana ụdị anaghị egosi mgbatị siri ike mgbe niile, ekele maka ọmụmụ ihe a anyị hụrụ ihe kpatara ya.
Ndụ Nzuzo nke Igwe ojii
Igwe ojii Anvil ma ọ bụ Comulonimbus dị n’ebe merụrụ emerụ
Elsdị ndị na-ebu amụma banyere ihu igwe na ihu igwe anaghị emegharịghachi ndụ nke igwe ojii mmiri ozuzo nke ọma, ebe ha na-anọchi anya ha site na nhọta dị mfe nke na-enweghị inye nkọwa zuru oke. Nwughari a dara ogbenye mere ka o sie ike nye ndi nyocha: “Mmetọ a na-eme ka igwe ojii anvil na-adi ogologo oge karịa nke igwe doro anya”, mana gịnị kpatara ya?
Otu ihe kpatara enwere ike ime ka aerosol (obere ihe okike ma ọ bụ nke mmadụ) nke bụ ihe ndabere maka ụmụ irighiri mmiri na-etolite gburugburu ha. Igwe na-emetọ emetọ nwere ọtụtụ aerosol (smog na haze) karịa nke dị ọcha, nke a na-atụgharịkwa obere mmiri maka ihe ọ bụla. Mmetọ na-amịpụta ụmụ irighiri mmiri ọzọ, mana pere mpe.
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke obere ụmụ irighiri mmiri na-agbanwe àgwà nke igwe ojii. Ọ dịla anya echere na ụmụ obere ụmụ irighiri mmiri na-eto eto na-amalite mmeghachi olu nke na-eduga n'igwe ojii buru ibu, na-adịte aka karịa ịdọba. Mkpa ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na-eme ka mmiri gị bilie site na oyi na oyi a na-ewepụta okpomọkụ nke tụlee nwere ma mepụta mgbanwe okpomọkụ nke na-ewepụta ntụgharị dị n'ime. Ndọkpụkpọ mmiri karị na-eme ka ụmụ irighiri mmiri karịa, na-ewulite igwe ojii.
Mana ndị na-eme nchọpụta anaghị elekarị mkparịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ metụtara igwe ojii buru ibu ma na-adịgide adịgide karị na gburugburu ebe obibi rụrụ arụ, na-egosi na anyị na-efu ihe anyị ga-etinye n'uche.
Iji dozie nsogbu a, ìgwè ndị na-ahụ maka ihe ọmụmụ a kpebiri iji oké ifufe nke oge ọkọchị tụnyere usoro kọmputa. Ihe nlere ahụ gụnyere njirimara anụ ahụ nke igwe ojii yana ikike ileba anya ma ọ bụrụ na nsị ahụ ga-adịwanye ike ma ọ bụ dị nro. Mmekọrịta dị na ọmụmụ a gbasara ọnwa 6.
Convection abughi ihe ojoo.
Anakọtara data site na ọnọdụ atọ nwere mmetọ dị iche iche, iru mmiri, na ifufe: ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ Pacific, ndịda ọwụwa anyanwụ China, na nnukwu ala dị larịị nke Oklahoma. Enwetara data site na DOE (US Department of Energy) sistemụ ihu igwe ARM.
Emere ihe ngosi na kọmpụta Olympus na PNNL (Pacific Northwest National Laboratory). Mgbagha ndị a nke ọnwa nke oké ifufe yiri nnọọ igwe ojii ndị a na-ahụ ugbu a, na-achọpụta na ụdị ndị ahụ weghachite igwe ojii mmiri ozuzo nke ọma.
Ilebara ụdị ndị a anya na achọpụtara na n'ọnọdụ niile, mmetọ na-abawanye ogo, ọkpụrụkpụ na oge nke igwe ojii anvil. Ma ọ bụ naanị n'ebe abụọ (ebe okpomọkụ na China) bụ ihe kpụ ọkụ n'ọnụ convection hụrụ. Na Oklahoma, mmetọ ahụ mere ka ndị mmadụ jiri nwayọọ nwayọọ na-ebubata. Ihe a na-ekwekọghị na ihe a tụlere na-egosi na ihe kpatara ya abụghị mkparịta ụka siri ike.
Site na inyochakwu ihe akụrụngwa nke ụmụ irighiri mmiri na kristal ice n'ime igwe ojii, ndị otu nyocha ahụ kwubiri na mmetọ ahụ mepụtara obere tụlee na kristal ice, n'agbanyeghị ebe ha dị.
Ọzọkwa, na mbara igwe dị ọcha, akpụrụ mmiri dị arọ ma na-adọba ngwa ngwa site na igwe ojii ọjọọ, na-eme ka ha gbasaa ngwa ngwa. Na mbara igwe emetọla, kristal ice dị obere ma dịkwa obere iji kpalie, si otú a mepụta igwe ojii buru ibu, na-adịgide adịgide karị.
Ntinye aka na okpomoku uwa.
N'aka nke ọzọ, ndị otu ahụ mere atụmatụ etu igwe ojii na-esi enye aka na okpomoku ma ọ bụ jụrụ. Igwe ojii a na-ajụ ala ụwa n’ehihie site na ndò ha ma na-eme ka okpomoku dị ka blanket n’abalị, na-eme ka abalị dị ọkụ karịa.
N'iburu n'uche mmetụta nke mmetọ na igwe ojii nke oke ifufe, anyị ghọtara na ha nwere ike imetụta oke okpomoku ikpeazụ ekwuru maka ụwa n'ime iri afọ ndị na-abịanụ. Mepụta igwe ojii nke ọma n'ụdị ihu igwe bụ isi ihe na-eme ka izi ezi nke mgbanwe ihu igwe dịkwuo mma.
Ozi ndi ozo: Umulọ Cumulonimbus, Nchoputa di nkpa na ihe ikuku di na obodo, Igwe ọkụ ọkụ na-esiwanye ike na okpomoku ụwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Igwe ojii mmiri ozuzo buru ibu, na-adị ogologo oge n'ihi mmetọ